APICMO Macaamiilkayaga Macaamiilka daawada ee loogu talagalay Intermediates CMO / CDMO
COMBI-BLOCKS waa badeecad cilmi-baaris ku salaysan iyo bixiyeyaasha caalamiga ah ee dhismayaasha combinatorial, organics iyo kiimikada ganaaxa.
KDC, Shirkadda Kiimikooyinka ee Takhasuska leh, ayaa lagu aasaasay 1990.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. waa shirkad isgaarsiineed oo ka kooban Israel oo xarunteedu tahay Petah Tikva, Israel. Waa shirkadda ugu weyn ee daroogada jilicsan ee adduunka ah iyo mid ka mid ah shirkadaha 15 ee ugu weyn adduunka.
Hoffmann-La Roche AG waa shirkad daryeel caafimaad oo caalami ah oo Swiss ah oo ka shaqeeya adduunka oo dhan laba qaybood: Pharmaceuticals and Diagnostics. Roche waa shirkadda saddexaad ee ugu weyn dunida oo dhan.
GlaxoSmithKline plc (GSK) waa shirkad daawo oo British ah oo xarunteedu tahay Brentford, London. GSK wuxuu ahaa shirkadda lixaad ee ugu weyn ee daawooyinka ee 2015
Khariidadda Pharmaceutical Pharmaceutical Limited waa Hindiya oo soo saara oo iibisa daawooyinka daawooyinka iyo daawooyinka firfircoon ee daawada (APIs) ugu horrayn Hindiya iyo Maraykanka.
Alpha Aesar, oo xarunteedu tahay Ward Hill, Massachusetts, Maraykanka, waa bixiyaha rasaasta iyo qalabka loo adeegsado cilmi baarista iyo horumarinta, iyo falanqaynta. Waxay leeyihiin tas-hiilaadyo dalal badan oo soo saaraan badi kimikooyinka ay iibiyaan.
Qodobka Categories Select Category Waxyaabaha CMO (2) Aqoonta caafimaadka (7)
2019 CNS Daaweynta Daawada Monotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Pig Maskaxda (37758-47-7) 06 / 05 / 2019
Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Pyridines 08 / 30 / 2018
Inta badan Hopeocycles ee Dunida 08 / 28 / 2018
Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato xeryaha spiro 08 / 28 / 2018
2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Adeegyada Abbaarada Kiimikada) Nambarka Diiwaanka 22536-61-4 08 / 18 / 2018